I Silicon Carbide Mechanical Seal Faces China Manufacturers & Suppliers & Factory
I Silicon Carbide Mechanical Seal Faces - umkhiqizi, ufektri, umhlinzeki waseChina
(Yonke imikhiqizo engu- 24 ye-I Silicon Carbide Mechanical Seal Faces)
Sinikeza ukukhethwa kwe-standard standard ceramic seal ne-disc yeziqu ze-ceramic, njenge-1/2 "i-disc ceramic, i-disc ye-ceramic ye-3 /4". Zonke lezi zici ze-ceramic ne-discs zinezilinganiso zokuqinisa, amanani okuzithokozisa aphelele kanye nokuncintisana. Badlala indima ebalulekile ekugumbeni imihlangano,...
I-Diamond Enziwe I-Alumina Ceramic Seal and Regulator Disc
Sesihlinzeka ngamakhulu ama-alumina ceramic seal ne-disc controller, lezi zingxenye ze-ceramic zisetshenziselwa uketshezi oluningi kanye ne-valve yokulawula i-valve neminyango ye-seal. Kungani ukhetha uphawu lwe-alumina ceramic ne-regulator disc? 1. Ukugqoka okukhulu ukugqoka nokuphila isikhathi eside; 2.Ukubeka...
Gqoka ukumelana neSiC silicon carbide ceramic rod
I-silicon carbide ceramic rod I-silicon carbide rod yayikhiqizwa yi-reaction high electro-chemical ye-sand and carbon. I-silicon carbide iyinhlangano enhle kakhulu futhi yenziwe ngamasondo okugaya kanye neminye imikhiqizo ehlukumezayo. Namuhla ukwaziswa kuye kwasungulwa waba yikhwalithi yekhwalithi ephezulu...
Iphini lokuqondisa i-sidiyoni le-silicon nitride ceramic
I-silicon nitride ceramic pin yokuqondisa Izingxenye ze-Ceramic welding ezenziwe nge-silicon nitride zikhuphula kakhulu inkonzo yokuphila futhi zenza amazinga aphezulu okuchaneka nokunemba okukhulu kunesikhathi esingeziwe ekuleliseni okubonakalayo. Izikhonkwane zokwehlisa izitshalo ngokuvamile zidinga ukushintshwa...
I-Silicon Nitride i-pinam cent pining
Yenziwe nge-Silicon Nitride ceramics. Esikhathini esivamile, sisebenzisa ukwenziwa komjovo we-ceramic ukwakha lolu hlobo lwephini elihle le-ceramic, kulula ukuthola izingxenye ze-ceramic ezicacile. Ngezinye izikhathi, kudingeka ukubekezelelana okungcono ukuze uhlangabezane nesicelo esenziwe ngokwezifiso ukuze inqubo...
I Silicon Carbide Mechanical Seal Faces
I-Silicon Carbide Mechanical Seal Faces
I-Silicon Carbide Ring Seal Faces
I-Alumina Mechanical Seal Faces
I-Ceramic Mechanical Seal Faces
I-Ceramic Mechanical Seal Face
I-Alumina Ceramic Mechanical Seal Faces